Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Mwepụta oghere NASA: Dec. 8 - Ebe a ga-ekiri
Roscosmos cosmonaut Alexander Misurkin ga-esonye na ndị sonyere na mbara igwe Yusaku Maezawa na Yozo Hirano na ụgbọ elu Soyuz MS-20 na-ebupụta site na Baikonur Cosmodrome na Kazakhstan na 2:38 am EST Wednesday, Dec. 8 (12:38 pm oge Baikonur). Mwepụta, ịkwọ ụgbọ mmiri na nloghachi ga-eme ka ọ dị ndụ na NASA Television, ngwa NASA na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ.
Ka ha gachara njem were were were were awa anọ, Soyuz ga-abata n'ọdụ ụgbọ mmiri Poisk modul n'elekere 8:41 nke ụtụtụ Ihe dị ka awa abụọ ka ụgbọ mmiri gachara, oghere n'etiti Soyuz na ọdụ ụgbọ mmiri ga-emeghe ma ndị ọrụ ụgbọ mmiri ga-ekele ibe ha.
N'otu oge na ọdụ, ndị atọ ahụ ga-esonyere Expedition 66 Commander Anton Shkaplerov na cosmonaut Pyotr Dubrov nke Roscosmos, yana NASA astronauts Mark Vande Hei, Raja Chari, Tom Marshburn, na Kayla Barron, na ESA (European Space Agency) astronaut Matthias Maurer, maka ihe dịka ụbọchị iri na abụọ na ụlọ nyocha orbital.
Na Sọnde, Dec. 19, Misurkin, Maezawa, na Hirano ga-arụcha ọrụ ha, na-ewepụ Soyuz na Poisk modul tupu ha agawa parachute-enyere aka ọdịda na steppe nke Kazakhstan na 10:18 pm EST (9:18 am Monday). , Dec. 20, Kazakhstan oge).
Mkpuchi ozi dị ka ndị a (mgbe niile Eastern):
Wenezdee, Dec. 8
2 am – NASA TV mkpuchi na-amalite maka mmalite 2:38 ụtụtụ.
Elekere 8 nke ụtụtụ – Mkpuchi TV NASA na-amalite n'elekere 8:41 nke ụtụtụ.
Elekere 10:15 nke ụtụtụ - Mkpuchi NASA TV na-amalite maka mmeghe na nkwupụta nnabata.
Sọnde, Disemba 19
Elekere 3 nke mgbede – mkpuchi NASA TV na-amalite maka mmechi oghere na 3:32 ehihie
Elekere 6:30 nke mgbede – Mkpuchi NASA TV na-amalite maka imechi n'elekere 6:54 nke mgbede
Elekere 9 nke abalị - mkpuchi NASA TV na-amalite maka deorbit na ọdịda. A na-atụ anya ọdịda maka elekere 10:18 nke ehihie
Nke a ga-abụ ụgbọ elu nke atọ Misurkin na-abanye na mbara igwe na ụgbọ elu mbụ maka Maezawa na Mirano, bụ ndị na-eme njem ha na mbara igwe n'okpuru nkwekọrịta n'etiti Space Adventures na Roscosmos.